UkuFunda koomatshini kunye neAcquisio kuyakukhulisa njani ishishini lakho | Martech Zone
Ngexesha lotshintsho kwimizi-mveliso abantu basebenza njengezinto kumatshini, bemi ecaleni kwemigca yendibano, bezama ukuzenza basebenze ngendlela eyiyo. Njengoko singena kwinto ngoku ebizwa ngokuba yi "Inguquko ye4”Siye samkela ukuba oomatshini babhetele kakhulu ekusebenzeni ngoomatshini kunabantu.
Kwilizwe elixineneyo lentengiso yokukhangela, apho abaphathi bephulo balungelelanisa ixesha labo phakathi kwamaphulo okwakha ngobuchule, kunye nokulawula ngobuchule kwaye bawahlaziya mihla le, siphinda sisebenzise ixesha lethu elininzi sizalisa indima evakalayo kumatshini.
Isizukulwana esidlulileyo, senze utshintsho ukusuka kwimveliso ukuya kuqoqosho olusekwe kwiinkonzo. Olu tshintsho lwaphinda lwatshintsha imeko yabasebenzi- kunye nentengiso kwiimeko ezininzi zanceda ekukhokeleni olo tshintsho. Ngoku, kwakhona indima yomthengisi iyaguquka, kwaye kule meko, iyaphuculwa.
Uninzi lwabathengisi abacinga phambili luyonwaba ngolu tshintsho, xa sinokuthi siqwalasele kweyona nto siyenzayo-ukuyila-ngelixa oomatshini bezongena kwaye benze eyona nto bayenzayo-bahlalutye isixa esikhulu sedatha ukuze babone ngokufanelekileyo kwaye baxhaphaze iipateni.
Idatha enkulu kunye nokuFunda ngomatshini, sisiqalo sesiseko sexesha elitsha elinokwenza ukuba iimveliso zinxibelelane nabathengi ngeendlela ezintsha zedijithali ngendlela ephucukileyo ebantwini kusetyenziswa itekhnoloji yale mihla. URanee Soundara kuba phakathi.
Ngelixa abanye besathandabuza ukwamkela ubuchwephesha obutsha bokuthengisa, abathengisi abaninzi baqala ukuqonda ukuba ukufunda ngomatshini kubalulekile kwimikhankaso yokusebenza kakuhle kunye neziphumo ezinamandla, inyathelo elilandelayo kukufumana isisombululo esifanelekileyo.
Usebenza njani uMatshini wokuFunda kuKhangelo lokuThengisa
Kwi-2014, utyalo mali lwentengiso kuqaliso lweArtificial Intelligence, kubandakanya ukufunda ngomatshini, ukufunda okunzulu, kunye nokuqikelela kubahlalutyi iphindaphindwe phantse kasixhenxe, ukusuka kwi- $ 45M ngo-2010 ukuya kwi- $ 310M ngo-2015 ngokwe Ukuqonda kwe-CBI.
Njengotyalo-mali kwi-AI kunye nokufunda ngomatshini kuqhubeka nokufumana amandla njengesiphumo se "4th Revolution Revolution," amaziko ombane kwishishini atshintshile ngokufanelekileyo. Iinkokeli ezisebenzayo ngoku zinoxanduva ngokulinganayo kuhlahlo lwabiwo-mali nakwiziphumo zetekhnoloji entsha. Njengoko uGartner Uphando oluxelwe kwangaphambili, ngo-2017, IiCMOs Baza kuchitha ngaphezulu kwi-IT kunogxa wabo we-CIOs.
Olu tshintsho luyenzeka kuba abathengisi bayatshayelwa yitsunami yedatha. Lo msebenzi unzima wokumba ngokusebenzisa iidatha zedatha ezingacwangciswanga ukuzama ukuqonda umfanekiso omkhulu akunakwenzeka ukwenza nge-130 exabytes yedatha eqhubekayo kwindalo yedijithali (zii-18 zeros kuthi ngabantu abaqhelekileyo). Abantu bayakwazi ukuqhubekekisa uninzi lwe-1000 terabytes (i-zeros eziyi-12), kwaye siqhubekeka iinombolo kancinci kancinci, ngento esiyibiza ngokuba yimpazamo yoluntu. Yikholwe okanye ungakholelwa, oku kusebenza ngakumbi ngakumbi kukhangelo lwentengiso kunye nephulo lokuzenzekelayo njengoko kwenza nayiphi na enye indawo yentengiso.
Xa kuziwa ekuchanekeni nasekusebenzeni, ukufunda ngomatshini kudlala kwibhola yokulinganisa eyahlukileyo, kwaye bonke abo bathengisi basabetha kwiiligi ezincinci baya kukufumanisa kunzima ukuhlala bekhuphisana njengoko abo bakhuphisana nabo bephakamisa ubuchule bokufunda ngomatshini rhoqo.
Yintoni ukuFunda koMatshini, ngokuchanekileyo?
Ukufunda ngomatshini sisifundo esikhulu ngeendlela ezininzi kunye nokusetyenziswa, kodwa kuhlala kusetyenziswa ukusombulula iingxaki ngokufumana iipateni esingaziboniyo, ngokwe Uqoqosho.
Umzekelo, ifandesi yentengiso yindawo ebumnyameni, apho abathengisi bengaqinisekanga ukuba bazokubeka phi iibhidi, indlela yokwenza uhlengahlengiso kwiselfowuni, kwaye ekugqibeleni indlela yokufumana uninzi loguquko kwinkcitho ephantsi enokubakho. Ngaphezulu, akukho xesha laneleyo lokuzinikela kwiphulo ngalinye lokuqinisekisa ukuba iyayandisa intsebenzo yayo xa ithelekiswa namandla ayo. Usebenzisa ukufundwa komatshini, iAdWords kunye nabathengisi benkampani yesithathu banikezela ngezisombululo zetekhnoloji ezithi zilandele ifandesi yentengiso, kwaye bafunde indlela yokuhlaziya kunye nokuhlengahlengisa iibhidi ngokuzenzekelayo zisebenzisa idatha yezembali ukuqikelela eyona bhidi isetiweyo ngohlahlo-lwabiwo mali, amanqaku akumgangatho, ukhuphiswano kunye notshintsho kwifandesi ekuhambeni kwexesha.
Indlela yakudala yokulawula imikhankaso yentengiso indikhumbuza isiqendu sakudala sikaSimps xa uHomer Simpson wamisela intaka yokusela ukuze imenzele umsebenzi. Kule meko, ii-algorithms zokufunda ngomatshini azicinezeli nje isitshixo sika "Y" ngaphezulu nangaphezulu, zihlala zilungelelanisa zisebenzisa ulwazi oluqokelelweyo kwaye lusebenzela ukuphucula ukusebenza ngaphaya kwezinto ezinokwenziwa ngabantu.
Unako ukuhamba kude nolo suku uxanduva losuku kwaye ugxile ekuthatheni abathengi abatsha, ukuphuhlisa ukuyila, kunye nokuphucula ukusebenza ngendlela engakumbi yomntu.
Iintaka ezimbini ngeLitye elinye
Ingxaki uninzi lwabathengisi abajongana nayo xa kusenziwa amaphulo okukhangela kukuphinda kabini, akukho xesha laneleyo okanye amandla okuhlala apho kwaye uhlengahlengise iibhidi kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwazo zonke iiakhawunti kunye namaphulo (anciphisa amandla okunyuka), kwaye okwesibini, abathengisi bayasokola ukufezekisa iziphumo ezinkulu kwifandesi ekhuphisanayo.
Ngamafutshane, abantu bafuna ukwenza izinto ngokukhawuleza, ngcono kwaye kube lula, kwaye ekuphela kwendlela yokwenza oko kukukunikezela koomatshini.
I-Acquisio ibonelela ngento esikholelwa ukuba sisisombululo esikhethekileyo kwimakethi yokukhangela, evumela abathengisi ukuba bagxile kwixesha labo kwimveliso enezinto kunye nesicwangciso ngelixa besebenzisa utyalo-mali esilwenzileyo kufundo lomatshini oluphambili lawula iibhidi zokukhangela ezihlawulelweyo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Iziphumo luphuculo olukhulu kakhulu hayi kwimveliso kuphela, kodwa nakwindlela yokusebenza kwephulo. Kuyabizwa Ibhidi noLawulo lweBhajethi (BBM).
Umatshini wethu osekwe ekufundeni, ibhidi yokuthengisa kunye nolawulo lohlahlo-lwabiwo mali kuphela kwemodeli yokurhweba rhoqo yeAdWords kunye neBing, ukulungisa iibhidi kunye nohlahlo-lwabiwo mali nje ukuba luhlaziywe ngumshicileli kwaye uqikelele ukuba ibhidi elandelayo izakuba yintoni- Sinokungqina ukuqhuba okungcono kwephulo kunezinye ii-algorithms zokuxelwa kwangaphambili. I-CEO, uMarc Poirier e-Acquisio.
Umsebenzi weBid kunye noLawulo loHlahlo-lwabiwo mali (BBM)
Njengokuba imoto eziqhubayo ikwazi ukubona zombini iipateni zabaqhubi kunye nokuziphatha ngalo mzuzu, kwaye zilungelelanise nendawo ezijikelezileyo endleleni, i-BBM ihlala iyazi imeko yefandesi, isombulula izigidi zokubala kunye nohlengahlengiso olunxulumene notshintsho kwifandesi , ixesha losuku nangaphezulu, ukugcina amaphulo akho eqhuba kakuhle. Oku kukhokelela ekusebenzeni okungcono kwephulo, ngalo lonke ixesha uhlala kwisitulo esingasemva kwaye uvumele ii-algorithms zikuqhubele.
Kwifandesi ye-PPC, ukuba ucwangcisa ibhidi, ocinga ukuba iyavakala, kwaye uyishiye, ukuhla okuqhubekayo kumaxabiso imini yonke kuthetha ukuba uya kubuyela kwiakhawunti yakho ngomso kwaye uyaphoxeka ziziphumo. Eyona nto imbi kakhulu, uya kuba uhlawule ngaphezulu konqakrazo oluthile, kwaye waphoswa ngamanye.
Uninzi lwee-algorithms zokuqikelela zilungelelanisa iibhidi ngokungafane zenziwe ngeyure, yonke imihla okanye ngeveki. Ngokuqikelela nokulungelelanisa ibhidi qho kwimizuzu engama-30, I-Acquisio ithatha inxaxheba kwifandesi rhoqo kunaso nasiphi na isisombululo sokusebenza, kwaye yenza uhlengahlengiso oluchanekileyo. Oku kunceda ukuqhuba i-CPC / CPA phantsi kwaye ucofe / uguqule phezulu.
Ngapha koko, isisombululo sethu singqinwa sisezantsi kweendleko ngokucofa ngomyinge we-40%, xa ujonga ngaphezulu kweakhawunti ezingama-20,000 ezixhonywe kwisithuba senyanga enye yi-Acquisio. Kwaye, kunye nee-algorithms ezisebenza ngesantya esifanelekileyo kuhlahlo-lwabiwo mali kuyo yonke imini kunye nenyanga iphela, iiakhawunti ezisebenzisa i-BBM zazinokubakho ngaphezulu kwe-3x yokwandisa uhlahlo-lwabiwo mali olupheleleyo ngaphandle kokuchitha ngaphezulu.
Kwaye xa kusiza ixesha eligciniweyo, ukwahlulwa kwe-WSI- ethi inelinye lawona manethiwekhi makhulu wentengiso yedijithali kwihlabathi-ikwazile ukusika iiyure, ukuba azikho iintsuku, kwinkqubo yabo yolawulo lomkhankaso oqhelekileyo usebenzisa i-BBM.
Sigcine ixesha elininzi ngoomatshini esizitshintshayo sigxile kumgangatho wamaphulo ethu. Heitor Siviero, uMququzeleli weProjekthi e IWSI eBrazil.
Ngabathengisi abagxile ekuphuculeni umgangatho wephulo, kunye nokufunda ngomatshini ii-algorithms ezisebenza mihla le ukuphucula ukusebenza, abathengi bahlala bebona oko sikubiza ngokuba, "x-iigrafu," apho kukho ispike esibonakalayo kunqakrazo kwaye ulahle kwi-CPC ephakathi emva kokumisela ubuchule bokufunda ngomatshini. .
Ngeziphumo ezinje ngezi, kulula ukuba amashishini atsale abathengi abatsha, kwaye ngexesha eligciniweyo kwimisebenzi yolawulo lwephulo, bakwimeko engcono yokuthatha abathengi abatsha kunye nokulinganisa ukusebenza kwabo apho kufanelekileyo: iqhinga, uyilo kunye nokwenza.
Into emnandi kukuba, itekhnoloji yethu iyasivumela ukuba sihambise ukusebenza kwephulo okwahlukileyo nakwezona akhawunti kunzima kakhulu ukuzenza, kubandakanya nezo zinomthamo ophantsi kakhulu okanye inkcitho ephantsi, umceli mngeni ongapheliyo kuye nakubani na olawula imikhankaso yokukhangela amashishini amancinci.
Thatha iNyathelo elilandelayo
Nokuba uyinxalenye yeshishini elincinci lendawo okanye iFortune 500, lixesha lokuba wamkele iminyaka yokufunda ngomatshini kwintengiso yokukhangela.
Ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nendlela esisebenza ngayo isicelo sakho kunye nesisombululo kulawulo lohlahlo-lwabiwo mali:
Jonga iWebinar Cwangcisa iDemo yobuqu
tags: Inguquko yesine kwimizi-mvelisoAcquisioIfandesi yentengisoiadwordsalgorithmkukubhadla okungeyonyanibbmibhidi kunye nolawulo lohlahlo-lwabiwo maliidatha yebhidiimithetho yebhidiBloombergcb ukuqondaUqoqoshouphando lwe-gartneri-maner Simpsoninguquko kwezoshishinoit vs cioyokufunda umatshiniUMarc Poirierukukhangela okuhlawulelweyoiibhidi zokukhangela ezihlawulelweyoranee soundaraibhidi yokukhangelawsiwsi eBrazil
UDavid uxanduva lokuphendula ngayo yonke imiba yomjikelo wengeniso Acquisio; Ukuthengisa, ukuThengisa, uPhuhliso lweShishini, uLawulo lweAkhawunti kunye nempumelelo yabaThengi. I-Acquisio ngumboneleli okhokelayo wehlabathi kwizisombululo zentengiso yedijithali ezivumela iiarhente kunye nabathengisi ukuba benze umsebenzi omkhulu wephulo kwizinga.
Ukuqonda ukubaluleka kweZikhokelo zoLuhlu lweeMpahla (IQG)